Sand Pebbles Tour N Travels | Antsoy izahay: 993.702.7574
Fiarahabana ho anao avy amin'ny Sand Pebbles Tour N Travels - mpitsidika mpitsidika mpitsangatsangana Odisha izay manohina ny fanahin'ireo mpanjifa maromaro miaraka amin'ny fonosana mafana sy ny fanampiana fanampiana. Sand Pebbles Tour N Travels dia nakarina tao amin'ny 1993 tao Bhubaneswar - renivohitra mahafinaritra antsoina hoe toeram-ponenana fizahantany ara-kolontsaina sy fitsangatsanganana mivoatra any Odisha. Sand Pebbles Tour N Travels dia miorina any amin'ny manodidina ny manodidina ary manana toeram-pandriana mahavariana.
Ny orinasa, nandritra ny taona maro, dia nametraka ny baolina nandehandeha ho toy ny andiam-piaramanidina voalohany sy ny orinasam-pizahantany tamin'ny famoahana tontolom-pifaliana be mpandeha miaraka amin'ireo lalan-kely mampientanentana mampifanaraka ny Puri Special Tours, North East Tours, Boat Cruises, fialofana herinandro, Bhubaneswar Special Tours, Fantaro ny Mini Amazon - Bhitarkanika, Odisha Spiritual Tour, Chilika miaraka amin'ny Golden Triangle Golden, RathaYatra Special Package, India Gateway ho an'i Odisha, Zava-bozen'i Odisha, Exclusive Odisha Tribal Tour, Sanctuaries of Odisha .... mba hiresaka vitsivitsy. Izy ireo dia samy miaraka amin'ny paositry ny fitsangatsanganana, ary koa ny kitapo fitsangatsanganana manandrama miavaka maromaro mba hahafaly ny mpanjifa ny Odisha Tribal Tours miaraka amin'ny Tempoly, Odile Buddhist Trail miaraka amin'i Bhubaneswar - Puri - Konark - ary zavatra maro hafa ..
Sand Pebbles mandehandeha any amin'ny toeram-panompoana fanampiny. Ny orinasa dia nanao sary sokitra iray ao amin'ny faritra misy azy Car Rental Services ary manana fitaovam-piadiana mahery vaika indrindra amin'ny fiara sy ny fiarabe maoderina. Ny fitsangatsanganana Sand Pebbles dia tsy mamoaka vato tsy voatery hanolotra ny mpanjifa amam-pifaliana sy ny tahiry ny tranomaizina amin'ny zava-drehetra ao amin'ny indostrian'ny fizahan-tany. Ny orinasa dia nanitatra ny fanatrehany ny fanatrehany tao Puri, Gopalpur, Bhitarkanika, Delhi sy Kolkata amin'ny ezaka mitatao ho an'ny mpanjifa marobe.
Sand Pebbles Tour N Travels dia neken'ny Minisiteran'ny Fizahan-tany, Govt. India amin'ny maha-orinasam-panjakana azy dia manome hery hanome tolotra fitsangatsanganana ho an'ny mpizaha tany. IATA ihany koa no ekena. Ny orinasa dia mpikambana ao amin'ny fikambanana miavaka toy ny IATO, UFTAA, ITTA, ADTOI, TAAI, ATOAI, FHRAI ary TAAO.
Sand Pebbles, mpisava lalana mpitsidika mpitsidika, Odisha dia nanolo-tena hanome tolotra miavaka ho an'ny mpanjifany manokana, faran'izay haingam-pandeha, araka ny fiheveran'ny paradigm ofisialin'ny indostrian'ny fizahantany. Ny fandaharana fitsangantsanganana ambony sy fandraisam-pahaizana no nahavita tamim-pihetseham-po avy amin'ny tarika adroit sy matihanina amin'ny lalao Sand Pebbles dia nanjary sarobidy maharitra, ny fotoana sy ny fotoan-tsariny indray ny sarin'ny orinasa. Ao amin'ny sehatry ny fampivoarana ny vokatra sy ny fampiroboroboana, ny orinasa dia nandeha an-kilaometatra amin'ny fandresen-dahatra ara-tsosialy. Ny ekipa za-draharaha matihanina dia mandinika, manamboatra, ary mametraka ny fomba fiasa; karazan-tsarimihetsika sy fizahan-tany isan-karazany izay mahatsara ny mpanjifa. Ireo dia mahasamihafa ny tontolo iainana, ara-kolotsaina, ara-panahy, fialam-boly, ny zavamiaina ary ny MICE, noho izany dia miompana amin'ny faniriana sy ny hetahetan'ny mpanjifa samihafa.
Odisha dia manintona ny fidoboky ny mpizahatany manerana ny tany. Ny fitsangatsanganana Sand Pebbles dia ao anatin'ny zavatra matevina hatramin'ny folo taona sy tapany izay mitarika mpizahatany maro be ary manome azy ireo fanatobiana fanatanjahan-tena, fivahinianana amin'ny fiara, ary fanohanana ara-logistika. Ny tolo-kevitra momba ny raharaham-barotra izay mampivelatra ny fifaneraserana, ny orinasan-tserasera, ary ny tsy fahaiza-manao dia nanatsara ny fisehon'ny lalamby Sand Pebbles amin'ny maha-mpitarika ny orinasam-pizahan-tany any Inde. Ny rafitra napetraky ny orinasa mba hahazoana antoka ny fifehezana ny kalitaon'ny kalitao sy ny fanomezana maimaim-poana ny serivisy dia nahasarika fiderana avy amin'ny faritra samihafa.
Manontania anay / Mifandraisa aminay
Ny fitsangatsanganana an-dranomamy Sand Pebbles dia mandroso amin'ny fanahy tsy miangatra. Ireo famirapiratry ny East India ary North East India dia amin'ny alàlan'ny fanandramanao, tsindrio fotsiny ny sehatra chic sy malemy omen'ny fitsidihan'i Sand and Pebbles ary ny ekipa manam-pahaizana miaraka amin'ny tsindrin-tsakafo mahavariana ho an'ny tsara indrindra dia manome traikefa mahafa-po.
Ny fitsangatsanganana Sand Pebbles dia manana harona feno volom-borona feno rakitra mahavariana ho anao. Ho an'ity biby ity ve, tombontsoa manokana, ara-panahy, pilgrim, kolontsaina & lova, fialam-boly, MICE .... Misy ampahany betsaka amin'ny karatra hiteraka ny fitiavanao. Ny soso-kevitrao dia tena sarobidy amin'ny fitsidihana Sand Pebbles - na Free Independent Tour na Group Inclusive Tour ... izahay no manana ny tsara indrindra ho anao.
Nandritra ny taona maro, ny fitsangatsanganana Sand Pebbles dia nametraka ny fisiany ho toy ny mpihazakazakazaka mpizaha tany ambony iray Odisha sy ny mpikarakara ny serivisy.
Amin'ny alàlan'ny torolàlana an-dalam-pandaminana, mandaitra sy voalamina tsara ao amin'ny kitapom-piantsoana - Sand Pebbles fitsangantsanganana mandritra ny vanim-potoana dia nipoitra ho anaran'ny toeram-ponenana ary nanjary nankasitrahan'ny vahoaka ao Odisha. Ny fiaramanidina fanta-daza ao amin'ny orinasa dia voatondro miaraka amin'ny fiara fitaterana an-dàlam-be 60, izay ahitana ny Mercedes Benz, Skoda Superb, Honda Civic, Toyota Corolla, Honda City, Toyota Innova, Tata Indigo, Mahindra Logan, Mahindra Scorpio, Mahindra Bolero, Tata Indica , Tempo Traveler, Mini-Vans ary Coach. Ny mpitarika dia mpitaingina za-draharaha tsara sy mahay mandray vahiny izay manome ny fanamiana ny orinasa. Ny orinasa dia mandray ny valiny avy amin'ny mpanjifa ny orinasa momba ny fampisehoana ireo mpamily ary manohizany tsy tapaka ny fitsipi-pitondran-tena. Ny mpamily dia nomena finday ary mifandray tsy tapaka amin'ireo mpitantana.
Sand Pebbles mitsangatsangana amin'ny fisian'ny mpanjifa dia ny famokarana tavoahangin-drano mineraly, gazety gazety anglisy, icebox, taratasy hosoka, boaty fanampiana voalohany ary elo amin'ny fiarany rehetra. Ny fiara rehetra dia misy fehikibo fehikibo sy gadget hafa sy fitaovana fiarovana hafa. Ny serivisy fampanofana fiara sy mpanazatra dia omena 24X7.
Ao anatin'ny sync miaraka amin'ny fangataham-pitenenana ho an'ny fialan-tsasatra an-dalam-pandrosoana manalasala ny tokotany sy ny fisavorovoroana mifandraika amin'ny fiainana an-tanàn-dehibe, ny fitsangatsanganana Sand Pebbles dia nametraka ny fananany tany amin'ny Valan-javaboarin'i Bhitarkanika. Ity trano fisakafoanana an-tsokosoko ekolojika ity dia natao hoe 'Jungle Resort'. Bhitarkanika dia fonenana tsy manam-paharoa amin'ny ala Mangrove voahasina amin'ny riandrano mahavariana sy ny fotaka, izay ao amin'ny distrikan'i Kendrapara ao Odisha. Iray amin'ireo toeram-pambolena mangatsiaka goavana indrindra any India, Bhitarkanika dia trano fonenan'ny biby sy biby isan-karazany. Sand Pebbles Jungle Resort dia natsangana mba hampidirana ireo mpizahatany ny fahatsapana maha-iray ny natiora. Ity toeram-ponenana ity dia nivelatra ho 'tsy maintsy hitazona toerana' amin'ny làlan'ny honeymooners. Ny sambo Sand Pebbles dia nahatonga ny marika tsy hay lazaina ho mpandraharaha ara-barotra ara-barotra. MICE ny orinasa MICE ao amin'ny orinasa dia manondro ny 'ace of future'. Ny fitetezana Sand Pebbles dia manakaiky kokoa ny fandraharahana sy ny fialan-tsasatra. Odisha dia toerana mahafinaritra tena mahafinaritra sy manintona an'i MICE ary mba hikolokolo ny tsena MICE be mpividy, ny tour Sand Pebbles dia nanomana tetikasa maro. Ny tanjaky ny tambajotra avo lenta dia ahafahan'ny Sand Pebbles mitsidika na manakana efitrano fandraisam-bahiny, manalavitra ny sain-dàlana, ary manamora ny fialamboly sy fialam-boly ho an'ny vahiny. Ny tolotra tena marina amin'ny fitsidihana Sand Pebbles dia voatery hanintona raharaham-barotra matetika.
Sand Pebbles 'n' Entertainment Group, fikambanana iray an'ny Travel Whale Tour 'n' dia manaiky ny India Tourism, Govt. ny India sy ny Department of Tourism, Govt. an'i Odisha. Io elatra io dia miorina ao Odisha renivohitra - Bhubaneswar. Ny fitantanana ny zava-mitranga dia mihetsiketsika ho toy ny fizotran'ny fizahan-tany. Misy ny fivoaran'ny raharaham-barotra ao Odisha. Ny Fientanan'i Sand Pebbles dia mirehareha amin'ny maha-mpiara-miombon'antoka ny fahombiazan'ny gala amin'ny orinasam-pitantanana ny hetsika ao amin'ny fanjakana. Ny fitsangatsanganana Sand Pebbles dia natao hanandratra avo lehibe kokoa miaraka amin'ny ekipa matihanina sy matihanina miboridana amin'ny fervoran'ny mpikatroka. Ny tanjon'ilay orinasa voalohany dia ny hanome tolotra miavaka ho an'ireo mpanjifany voavolavola amin'ny alàlan'ny fifantohana amin'ny lanjany mifototra amin'ny karajia, mifantoka amin'ny mpanjifa.
Ny fitsangatsanganana Sand Pebbles dia mamoaka bokikely fampahafantarana sy feno ary fampiroboroboana hafa izay toa mahagaga. Ny fonosana manokana momba ny fitsangatsanganana Sand Pebbles dia mamoaka ny mpifankatia foko ao Odisha. Manome toky ny fizahantany ara-pizahan-tany izy io ary ireo fahafaha-manararaotra ireo mpizahatany dia manana fialantsasatra miafina amin'ny maha-olom-pirenena manan-kolazaina izay nomen'ny foko Odisha. Ny endriky ny fizahan-tany ao amin'ny orinasa dia mampiseho ny tsirony manokana avy amin'ny mponina indizeny ao amin'ny fanjakana; ny fombafomba sy ny fomba amam-panao. Ireo mpizahatany dia omena lalana malalaka hitoriana ireo fety manintona izay mankalaza ny fomba fiaina tsy manam-paharoa mitaky ny fiarovana ny lova miavaka. Odisha teboka iray toerana manan-danja ao amin'ny sarintany foko any India noho ny fananana karazan'olona samihafa foko. Ny ankamaroan'ny foko dia hita any amin'ny distrikan'i Koraput, Rayagada, Naurangpur, Malkangiri, Kalahandi, Kandhamal, Baudh, Keonjhar, Sundargarh ary Mayurbhanj. Ny Sand Pebbles Tribal Tours dia mahafaoka ireo toerana rehetra ireo ary manala ny fahatsapana haitao sy ny fampisehoana ny vondrom-piarahamonina indizeny. Ho an'ireo mpizahatany ara-kolontsaina, ny fitsangatsanganana Sand Pebbles dia manome ny fonosam-panatontosana. Ny fety rehetra dia mifototra amin'ny lalana mahazatra ao amin'ny orinasa. Ireo mpizahatany dia mahazo fahafahana mandritra ny androm-piainany mba hananganana ny toeram-piompiana kanto any Odisha mandritra ny fizaran-taona. Ny voninahitra sy ny ekstasy amin'ny fetibe ara-kolontsaina goavana toy ny Puri International Beach Festival, ary ny Festival Konark Festival dia mety ho an'ny mpizahatany mba hientanentanana ny famirapiratana.
Manana toeram-pizahantany fizahan-tany any ambanivohitra i Odisha. Ankoatra ny hatsaran-tarehin'ireny toeram-pizahantany tsy misy fialan-tsasatra ireny, inona no mahatonga ny mpizaha tany ho mpitsangantsangana, ny kolontsaina, ny marika ara-pivavahana ary ny dikan'ny arkeolojika. Ny sahan-dalan'ny toeram-ponenana ambanivohitra any Odisha dia tsy navoakan'ny fonosana manokana ao amin'ny Tour de Sand Pebbles. Ny orinasa dia manome lanja ny fampivoarana vokatra ara-kolontsaina indizeny any amin'ny faritra ambanivohitra toy ny Raghurajpur. Mamporisika ireo mpizahatany ho fahatsapana fifandraisana amin'ny vazimba teratany any amin'ireo vondrom-piarahamonina ambanivohitra ary manome lalana ny fanabeazana azy ireo. Ireo mpizaha tany dia mitady "fifandraisana akaiky" sy "marina" amin'ny mponina indizena ao Odisha. Ny fonosan-dalan'ny fitsidihana Sand Pebbles dia natao hamolavolana an'i Odisha sy ireo firenena mpifanolo-bodirindrina tahaka an'i Jharkhand, Madhya Pradesh, ary Chhattisgarh izay ahitana ny fahitana ny tanàna ao amin'ireo firenena izay mampiseho ny fomba fijery hafahafa toy ny paddy, zaridaina, tandindom-pahavinan'ny seranan-tsambo, karazana tokantrano sy mpifindra monina vorona, fety, takila .... ary ny lisitra dia mahafaoka.
Fepetra Politika Politika fandefasana Blog Testimonials Mifandraisa aminay Sitemap
Terms Politika Politika fandefasana Sitemap